Yaa Wax Yeelay Cabdiwaaxid?
Abdi A. Kacaandiid
Bahda Somalitalk iyo Akhristayaal Salaan,
Marka hore sida aan filayo inay dad badani ila qabaan, qoraalada Cabdiwaaxid oo tirada badan, badanaa dhaadheer, nuxurkana yar, markaan arkay inay isku ujeeeddo yihiin hal meelna ku wajahan yihiin, waxaan hadda ka akhriyaa kaliya cinwaanada aan ku arko bogga hore ee Somalitalk.com iyo websites-ka kale ee soomaalida. Nacaybka xad dhaafka ah ee Cabdiwaaxid u hayo MDGPL Cabdullahi Yusuf, waa war la qabaa xiiso ma leh.
Haddaba qoraalkaygu waxa uu jawaab u yahay qoraalkii dhowaan Cismaan Axmed Sheekh kaga faaloonayay Cabdiwaaxid. Inkastoo Cabdiwaaxid isku dayay inuu jawaab ka bixiyo arrintaas, haddana ma ahayn jawaab lagu qanci karo (unsatisfactory answer). waxaaba laga yaabaa in Cabdiwaaxid ruuxiisu uusan garayn jawaabta rasmiga ah ee waa kuma Cabdiwaaxid. Waxaan u malaynayaa in jawaabta rasmiga ah ee waa kuma Cabdiwaaxid laga dhex heli karo, haddii su’aasha si kale loo dhigo oo laga faalloodo waxa Cabdiwaaxid har iyo habeen ula dagaalamayo Cabdullahi Yusuf iyo reer Puntland.
Aragtidayda dhowrka sababood ee hoose bay mid noqon kartaa:
1. In Cabdullahi dhib toos ah u geystay Cabdiwaaxid ama qoyskiisa (Directly).
2. In sida Cabdiwaaxid sheego uu dagaalkiisu yahay mid diineed.
3. In Cabdiwaaxid rabo inuu soomalida kale ku guubaabiyo inay ka horyimaadaan siyaasiga reerkooda oo caayaan, si markaas qabyaaladdu u yaraato.
4. In sida badanaa ka dhacda waddamada reer galbeedka oo dadka qaar iska dabagalaan qof caan ah (celebrity) iyagoo ama leh ha lagugu barto ama ujeeddo kale, iyo ugu danbayntii
5. In Cabdullahi dartii dhibi usoo gaartay Cabdiwaaxid (Indirectly), oo uu dhibbane yahay.
Hadaan ugu horreyno qodobka kowaad (1), u malayn mayo in dagaalka Cabdiwaaxid ku salaysan yahay dhibaato toos uga soo gaartay Cabdullahi ama qoyskiisa, waayo sida Cabdiwaaxid marar badan qoraaladiisa ku xuso Cabdullahi waaba isku reer hoosaad.
Tan labaad (2) oo sida Cabdiwaaxid sheegto ah inuu diin ka difaacayo, iyana iima muuqato oo soomaalidu waa tan hore u tiri ninkaad kabo ka tolanayso kuwiisaa la eegaa. Diinta Cabdiwaaxid sheeganayo inuu difaacayo waa midda reebta in dadka la isku diro lana isku fidmeeyo, iyo in edaabta laga tago oo aan dadka la jaa’ifeyn, kuwaasoo qoraaladiisa saldhig u ah sida walaalkay Cismaan Sheekh iyo rag kaleba xuseen.
Tan saddexaad (3) oo ah inuu horseed ugu noqdo soomaalida kale in qof walba ka horyimaado ninka madaxda u ah reerkiisa, taas waa laga yaabaa. Waliba markaan dhowr jeer arkay sida Cabdiwaaxid marar badan ugu xuso qoraaladiisa inay Cabdullaahi isku reer yihiin arrintaas waa igu soo dhacday, Haddiise Cabdiwaaxid wax kusoo biira waayay oo uu ku kaligiis yahay, ilaa haddana aan la hayn nin sidiisa oo kale daba gala siyaasiga reerkooda, malahayga wuu iska dayn lahaa isna, marka taasna fili mayo inay sababtu tahay.
Maaddaama Cabdiwaaxid ku noolyahay mid ka mid ah waddamada reer Galbeedka, Jawaabta afraad (4) waa suuragal. Cabdiwaaxid in magaciisa lagu arko Cabdullahi Yusuf oo la dhihi karo siyaasiga ugu caansan soomaalida maanta, isku soo saar ama ka ag dhowow magaciisa waa wax suurogal ah. Sida akhristayaasha qaar ogyihiin, waxa mar dhexdaas ah dhacday in ninka lagu magacaabo David Letterman oo ah Talk Show Host caan ka ah America ay habari iska daba gashay oo naftii u keentay iyadoo mar kasta hor taagan gurigiisa. Soomaalidu badanaa uma dhaqanto siyaabahan, taasna jawaab i qancisa ma noqon.
Tan ugu danbaysa (5) oo ah in Cabdiwaaxid si dadban dhibi uga soo gaartay magaca Cabdullahi Yusuf baa ah mid aan is iri jawaab bay u noqon kartaa nacaybka xad dhaafka ah ee wiilku u qabo madaxwaynaha Puntland. Akhriste sidaynu la soconno shacabka somaliyeed dhib weyn baa kasoo gaaray xukuumaddii hore ee Mahammad Siyad hoggaanka u ahaa, dadka ay Cabdullahi iyo Cabdiwaxid ku abtirsadaanna waxay ahaayeen kuwa dhibku uguna horreeyay uguna badnaa. Cabdiwaaxid oo siduu sheegay markaas yaraa, waxaa suuragal ah in dhib loogu gaystay magaca guud ee uu ama yahay ama Cabdullahi la wadaago, taasoo ku kalliftay inuu Cabdullahi aad u necbaado.
Qoraalkii Cismaan Sheekh waxaan ku arkay in Cismaan uu Cabdiwaaxid kaga difaacayo reer Puntland oo uu meel ka dhac ku sameeyey. Haddaba maxaa Cabdiwaaxid reer Puntland iyo Cabdullahi ku ibtileeyey. Sidoo kale mar Cabdiwaaxid weerarayey qoraalkii Xagar-Yare ka qoray Cabdullahi Yusuf, markuu ka hadlayay inqiliaabkii dhicisoobay ee 1978 wuxuu ciidankii Muqdisho joogay oo dhan hoggaan uga dhigay Morgan. Wixii jenereallo xamar joogay oo diyaar u ahaa inay difaacaan dowladdii Mahammad Siyad, wuxuu kala soo baxay kii dad ugu xigay oo uu rabaa inuu na baro inuu isagu ahaa cadawga xamar loogu tegi lahaa. Waa iga yaabisay taasina xaqiiqdii.
Markaan waxyaalahaas oo dhan miisaamay, waxaan soo xusuustay aragti oranaysa in carruurta yaraan lagu waxyeelleeyo iyagoo danbi la’aan ah (innocent victims), inay marar eedeeyaan oo nacaan waalidiintood ama ciddii kale ee dad ugu dhow.
Marka qofku naco qofba qofkuu ka xigo, sida Cabdiwaaxid reer Puntland isku dirkooda iyo cayda Cabdullahi kaliya ugu fooggan yahay, waxaa xigta in qofku aakhirka naco naftiisa, haddii qofku naftiisa nacona waxay qofka u horseedi kartaa inuu noqdo suicidal oo uu naftiisa khaarijiyo, ilaah baan ka magan galnee. Waana taas taan aakhirka uga baqsanahay Cabdiwaaxid.